Maxaa maska ka ilaaliya suntiisa? - Xogside
Home BARNAAMIJYADA CAAFIMAADKA Maxaa maska ka ilaaliya suntiisa?
Culimo si weyn u baadhay Masaska iyo noolaha xamaartada ayaa cadeeyay in Masaska oo dhami ay leeyihiin difaac dabiici ah oo Allah (sw) ku manaystay, taasi oo ka ilaalisa waxyeelada suntan uu sii daayo.
Daraasaddan ayaa sheegtay in haddii ay laba Mas is laayaan oo ay is qaniinaan iyagoo sun isku sii dayanay aanay taasi midkoodan waxba yeelayn. Waxaana taasi uu sabab ah iyadoo mid kastaa uu leeyahay difaacaasi dabiiciga ah ee uu iska ilaaliyo suntan.
Previous articleGuddida Ilaalinta iyo Dabagalka Hantida Qarankee Golaha Wakiilada ayaa maànta Xafiiskiisa kulan kula yeeshay wasiirka horumarinta maaliyadda Dr. Sacad Cali Shire kulankaas oo ka dhacay xafiiska Wasiirka.
Next articlekulan Dhexmaray Wasiirka Qorshaynta iyo madaxda hay’addaha Wadamada Carabta
Cunista Rumaanka , Tufaaxa Iyo Liin Macaanta Oo Waxtar Weyn U Leh Caafimaadka!